Diyaarado joog hoose ku duulaya oo lagu arkay magaalada Kismaayo iyo duleedkeeda.
Sunday February 16, 2020 - 12:13:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Shacabka ku dhaqan deegaanno katirsan gobollada Jubbooyinka ayaa ka cabanaya diyaarado joog hoose ku duulaya oo lagu arkay hawada.
Magaalada Kismaayo iyo deegaannada ku dhow waxaa shalay lagu arkay diyaarad nuuca dagaalka ah oo joog hoose ku duullaysay taas oo argagax ku ridday dadka iyo duunyada.
Diyaaradda oo aheyd nuuca dagaalka ee gantaallada xambaarta ayaa dhowr jeer ku dul haadday magaalada Kismaayo iyo Jaziiradaha ku dhow, goob joogayaal ayaa sheegay in ay arkeen diyaaradda oo hawada ku tuuraysay waxyaabo holcaya.
Xoolo daaqayay baadiyaha Kismaayo ayaa howdka ku firxaday kadib markii ay diyaaraddu kusoo dhowaatay, qaar kamid ah gaadiidka dadweynaha ayaa iyana ku sigtay in ay rogmadaan kadib markii diyaaraddu kusoo dhowaatay.
Jaziiradaha dhaca badweynta Hindiya ee ku dhow magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in diyaaraddu muddo saacada ah ku dul wareegaysay, warar shalay laysla dhax qaaday ayaa sheegayay in diyaaradda oo gubanaysa ay badda dhaxdeeda ku dhacday balse lamasoo sheegin goob ay diyaaraddu ku dhacday.
Dhinaca kale taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ayaa ka hadlay diyaaradaha joogga hoose ku duulaye ee shalay lagu arkay Koonfurta Soomaaliya, AFRICOM ayaa qoraal kooban oo sawir watay ku sheegtay in diyaaradda oo nuuceedu ahaa B52 ay duulimaad ka sameysay wadamo dhaca geeska Afrika oo Soomaaliya kamid tahay.
Mareykanka ayaa cabsi gelinta ay kula kaceen shacabka rayidka ah iyo duunyadii ay dhaqanayeen ku tilmaamay dhoolatus ciidan iyo tababar melleteri, arrintan ayaa imaanaysa xilli Mareykanku uu maalmihii lasoo dhaafay uu Koonfurta Soomaaliya ka geystay duqeymo uu dad shacab ah ku laayay.
DF oo amartay in la xiro dugsiyada Qur'aanka lagu barto.